China Folding yemari trolley DX3013 mugadziri uye mutengesi | Duoduo
Ita Nha .:DX3013
Akavhurika saizi: 108 x 48,5 x 54 cm
Saizi yakaiswa: 75 × 48.5x5cm
Ruvara: sirivha & dema
Chishongedzo: Aluminium & Plastiki
Saizi yemabhokisi: 78 × 50.5x20cm
Iyo inorema mutoro ruoko ruoko ngoro, yakanaka dhizaini, yakasimba uye isingaremi. Iyo yakakodzera kushandisa mumhuri uye kubuda. Iwo mavhiri uye epazasi ndiro anokwenenzverwa, ayo anochengetedza zvikuru nzvimbo uye inounza hukuru hwakanyanya kuhupenyu hwedu hwezuva nezuva nekufamba. Zviri nyore kuisa mumota medu. Iyo ndiro yepasi yakagadzirwa neAluminium, inorema mutoro uye anti-ngura, zvakare chemukati anti-slip design uye yakachengeteka kushandiswa.
Inotakurika, Isingaremi, Inogara.
Inovhura pakarepo nekubata kweimwe bhatani dzvuku.
Bhora rinotakura mavhiri evhiri anotora kukanganiswa uye anotenderera mushe
Tinokura kumusoro kwekuchengetedza kuri nyore, Kugadzirira kushandisa, hapana musangano unodikanwa.
Yakakura kushandiswa munzvimbo dzemisasa, pikicha, paunenge uchifamba, uchitenga kana basa! Nyore kubura mabhokisi, machira, zvikafu uye zvakawanda!
Yedu Fordable Ruoko Irori mota yakanakira kuzadzisa chero chinofamba chinodiwa kubva pachirebvu kusvika kune chinorema basa. Kuzvifambisa nealuminium ruoko rori panzvimbo yemawoko kunobatsira kudzikisa ruoko kubata kukuvara, kugadzira nzvimbo yakachengeteka yebasa. Zadzisa tarisiro yako yekushandisa nyore kushandisa ruoko kubata chombo, kugona kupeta uye kuwedzeredza nemakumbo ako, iyo foldable aluminium ruoko rori idiki kuti ishandiswe nyore nyore uye kutora mumota, zvakare, ichave yakanyanya compact mupakiti painenge ichitakura. Muchigadzirwa, ruoko rwedu rwemota rwunosimbisa nzvimbo yekubatanidza pakati peplate uye furemu, ichipa chinhu chakasimba paunounza chinorema
Yakanaka kushandiswa kana uchifamba, kutengeserana kuratidzira, chikoro, basa, nhandare, mapikicha uye inofanirwa kuve mune yese mota trunk! Kutakurisa mutoro wekutakura, mabhokisi, magirosari, mabhodhoro emvura, mapepa, zvirimwa zvakaiswa muhari nezvimwe zvakawanda!
Yepfuura: Folding mikwende trolley DX3012
Inotevera: Folding mikwende trolley DX3015